Translate interprétation from French to Burmese
Results for interprétation translation from French to Burmese
ကျမ်းစာ၌ပါသော အာနဂတ္တိ စကားမည်သည် ကား၊ ကိုယ်အလိုအလျောက်အနက်မပေါ်ဟု ရှေ့ဦးစွာ သိမှတ်ကြလော့။
Ses illustrations, pleines de couleurs et d’humour, laissent transparaître une interprétation personnelle des expressions locales, une vision candide d’une culture qui cherche à en comprendre une autre à travers l’usage du langage familier. Dans la description de son blog, on peut lire :
ကျွန်မ​တို့ ကိုယ်တိုင် တွေ့​ကြုံ​နေ​ရ​တဲ့ အခြေအနေ​တွေ​ကို ဖော်​ပြ​ဖို့​အတွက် ကျွန်မ​ရဲ့ ဗင်​နီ​ဇွဲ​လား​လူ​မျိုး​အမျိုးသား​က သူ့​ယဉ်ကျေး​မှု​က ပေါ့​ပေါ့ပါး​ပါး​အသုံး​အနှုန်း​တွေ သုံး​လေ့​ရှိ​တယ်။
ညီအစ်ကိုတို့၊ အဘယ်သို့နည်း။ သင်တို့စည်းဝေးကြသောအခါ၊ ဆာလံသီချင်းကို ရသောသူ၊ ဆုံးမဩဝါဒ စကားကို ရသောသူ၊ အခြားသောဘာသာစကားကို ရသောသူ၊ ဗျာဒိတ်တော်ကိုရသောသူ၊ အနက်ဘော်ပြရာ ကိုရသောသူ၊ အသီးအသီးရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ခပ်သိမ်း သောအမှုတို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှါ စီရင်ကြ လော့။
à un autre, le don d`opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l`interprétation des langues.
တယောက်သောသူအား၊ တန်ခိုးကိုပြနိုင်သော အခွင့်ကို၎င်း၊ တယောက်သောသူအား ပရောဖက်ပြုနိုင်သော အခွင့်ကို၎င်း၊ တယောက်သောသူအား စိတ်ဝိညာဉ် တို့ကို ပိုင်းခြား၍သိနိုင်သော အခွင့်ကို၎င်း၊ တယောက်သောသူအား အမျိုးမျိုးသော ဘာသာစကားကို ပြောနိုင်သော အခွင့်ကို၎င်း တယောက်သောသူအား ထိုဘာသာ စကား၏အနက်ကို ဖော်ပြနိုင်သော အခွင့်ကို၎င်း ပေးတော်မူ၏။
minister (Polish>Romanian)privi (Italian>Greek)manatees (English>Greek)antiagregante (Romanian>Danish)instrumendina (Estonian>Slovak)konferenzdienste (German>Greek)midtvejsrevisionen (Danish>Dutch)laagspanningsnetten (Dutch>French)cela ne vient pas à un jour (French>Dutch)transcaucasica (Italian>Portuguese)naar sathu (Tamil>English)agrimonetárias (Portuguese>Slovenian)como se escribe en ingles horario de clases (Spanish>English)you are hot (English>Greek)jangan membazir air! (Malay>English)son idealistas (Spanish>English)naghuhukay english (Tagalog>English)walan yu (Tagalog>English)afteralong time we meet (Hindi>English)नाक पर तिल का निशान (Hindi>English)pelotero (Spanish>English)prof (English>Turkish)kølle (Danish>Korean)cuatro (Spanish>German)સમૂહમાં (Gujarati>Xhosa)